काठमाण्डौ । मेनुका चापागाईको कवितासंग्रह ‘समयको आवाज’ शनिबार काठमाण्डौमा लोकापर्ण गरिएको छ । रमेश खकुरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा भुवनहरि सिग्देल, डा कोषराज न्यौपाने, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा.देवी नेपाल र मेनुका चापागार्इं स्वयमले संयुक्त रूपमा पुस्तकको लोकापर्ण गरेका हुन् ।
‘सालिक बोलिरहेछ’ कवितासंग्रह (२०७३) र ‘विश्वव्यापी’ छन्दकविता भिडियो प्रतियोगिता (२०७४)मा प्रथम र राष्ट्रिय कविता महोत्सव (२०७५)मा तृतीय चापागाईंको यो दोस्रो कवितासंग्रह हो । काठमाण्डौको थापागाउँस्थित लेखनकुञ्जमा लोकार्पण सम्पन्न भएको हो ।
कवितासंग्रह माथि बोल्दै प्रमूख अतिथी रमेश खकुरेलले युवापुस्तामा मेनुका चापागाईं छन्दमा राम्रो लेख्न सक्ने कवि भएको बताए । उनले भने- मेनुका चापागाईंको पुस्तक ‘समयको आवाज’ बाट धेरै कुरा सिक्न र जान्न सकिन्छ ।'
कवि तथा आख्यानकार भुवनहरि सिग्देलले अब छन्द कविताको युग आएको बताए । मेनुका चापागाईंको कविता छन्द कविताहरूको नमुना संग्रह भएको उनको भनाई थियो । समालोचक डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले यो पुस्तकका कविता जति पढ्यो उति पढ्न मन लाग्ने खालको भएको बताए । त्यसैगरी समालोचक डा.देवी नेपालले मेनुका चापागाईको यो कवितासंङ्ग्रह छन्द कविताको प्रयोगशाला नै भएको बताए । छन्द कविता लेख्न र पढ्न चाहनेहरू सबैको लागि यो कवितासंग्रह अत्यन्त उपयोगी रहेको उनको भनाई थियो ।
मुक्तककार यादव भट्टराईले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कृतिकार मेनुका चापागाईले आफ्ना कविता वाचन गरेकी थिइन् । १०४ पृष्ठको यो पुस्तकको मूल्य २०० रहेको छ । कवितासंग्रह शिखा बुक्स, काठमाण्डौले प्रकाशन गरेको हो ।